လင်္ကာ: မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဖြိုခွဲသွားတဲ့ တရားခံအစစ်က ဘယ်သူတွေလဲ (၆)
မောင်ကျောင်း April 6, 2012
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးစေချင်ပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် လိပ်ပတ်မလည်ဘူးဗျာ။
မခင်ရွှေလှိုင်ကိုယ်တိုင်လည်း ရေးသာရေးတယ်။ ဝေေ၀၀ါးဝါးဖြစ်နေပုံပါပဲ။
စေတနာနဲ့အကြံပြုချင်တာ ကတော့ ထောက်လှမ်းရေးကြောင့်ပဲ သတ်သတ်၊ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲသတ်သတ် ဒီလိုရက်ရက်စက်စက် ခေါင်းဖြတ်လက်ဖြတ် တွေး တောင်မတွေးရဲတဲ့ညှင်းဆဲနည်းပေါင်းစုံနဲ့ညှင်းဆဲ ရဲတဲ့နှလုံးသားရှိခဲ့သူတွေအတွက်လျှောက်လဲချက်တွေ ပေးမနေစေချင်တာပါပဲ။ မခင်ရွှေလှိုင်ပင်ပန်းလှပါပြီ။
ထောက်လှမ်းရေးကထိုးကျွေးတိုင်း ခေါင်းဖြတ်တဲ့သူတွေကလည်းဖြတ်ကြရောလားဗျာ။ စစ်ပွဲမှာတယောက်နဲ့ တယောက်ပစ်ကြသေကြ တဲ့ကိစ္စကိုဘာမှမပြောလိုဘူး။ ဒေါသအလျောက်သတ် ကြဖြတ်ကြတဲ့ကိစ္စကိုဘာမှမပြောလိုဘူး။ ခုက လပေါင်းများစွာတရိရိညှင်းပန်းပြီးမှ ရက်ရက်စက်စက် ခေါင်းဖြတ်ပြီးသတ်သတဲ့။ အခု ခင်ဗျားစာတွေတောက်လျှောက်ဖတ်ပြီးမြင်နေရသ လောက်က အဲဒီလိုညှင်းဆဲသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ သူတွေအတွက် ခင်ဗျားက မပြီးနိုင်မစီးနိုင်လျှောက်လဲ ချက်တွေ ပေးနေတာပဲ။ လှုပ်လေမြုတ်လေဖြစ်မှာပဲဗျာ။
သူတို့ ကမညှင်းဆဲချင်ပါဘူး။ ခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့ လည်း မသတ်ချင်ပါဘူး။ ထောက်လှမ်းရေးက အစီအစဉ်တကျထိုးကျွေးတာကိုခံလိုက်ရလို့သူတို့ ခင်မြာ ဘာမှနားမလည်ပဲ ခေါင်းတွေကို ဖြတ် လက်တွေကိုဖြတ်လိုက်ရတာပါရှင် ဆိုတဲ့လျှောက်လဲချက်ကတော့ ဖတ်ရတဲ့သူတွေ ရီရမလို၊ငိုရမလိုပါပဲဗျာ။
နောက်တခုက လူသတ်သမားတွေအတွက်လျှောက် လဲချက်တွေတသီတတန်းအမျှင်မဆုံးနိုင်အောင်ပေး နေပေမယ့် ဥက္ကဌကိုထွန်းအောင်ကျော်အပါ အ၀င်ခေါင်းဖြတ်သတ် ခြင်းခံလိုက်ရသူတွေအတွက် စာနာမှုတစွန်းတစခင်ဗျားရေးတဲ့စာတွေမှာမတွေ့ ရတဲ့အချက်ပါ။ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရတဲ့အပြင် ခုချိန်ထိထောက်လှမ်းရေးပါလို့ မဟုတ်ပဲစွတ်စွဲခံရရင် ငါသာဆိုဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားထားပါမခင်ရွှေလှိုင်။
့ခေါင်းဖြတ်ခံရတဲ့ ၁၅ ယောက်ထဲက ဘယ်တယောက် က ထောက်လှမ်းရေးလဲမခင်ရွှေလှိုင်။ သတ္တိရှိလို့ ခင်ဗျားဒီစာတွေရေးနေတာမဟုတ်လား။ သတ္တိရှိရှိဖြေပါ။ ဘယ်တယောက်ကထောက်လှမ်းရေးလဲ။
မခင်ရွှေလှိုင် ခင်ဗျာ မခင်ရွှေလှိုင်ဟာ လက်ရှိ AB ဥက္ကဌ ရဲ့ ဇနီးဖြစ် သလို မြောက်ပိုင်း ရာဇဝတ်မှုကြီး ရဲ့ မျက်မြင် သက်သေ တဦးအနေနဲ. မိမိရေးတဲ.စာတွေကို တာဝန်ယူနိုင်သလို မခင်ရွှေလှိုင် ရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ လက်ရှိ AB ဥက္ကဌ မှလဲ မခင်ရွှေလှိုင် ရဲ့ စာများကို သေသေချာချာ ဖတ်ရှုပြီး internet ပေါ်တွင်ဖော်ပြဖို.သဘောတူတယ်လို. ယူဆရမှာ ဖြစ်ပါတယ်
ကိုထွန်းအောင်ကျော်အပါအ၀င် ကျဆုံး နှိပ်စက် (လူမဆန်စွာ) ခံခဲ.ရသူများအပေါ် မခင်ရွှေလှိုင် အနေနဲ့ ဘယ်ကဲ့သို.သဘောထား သလဲဆိုတာ နဲ. လူမဆန်စွာ ရာဇဝတ်မှုကြီးများကို ကျုးလွန်ခဲ့သူများ အပေါ် ဘယ်ကဲ့သို.သဘောထား သလဲဆိုတာ မခင်ရွှေလှိုင် ရဲ့ စာများက ဖေါ်ပြပြီး ဖြစ်ပါတယ်
မခင်ရွှေလှိုင် ရဲ့ အနာဂတ်ကို ကျနေိာများ စောင့်ကြည့်လျက်ပါ
စာဖတ်သူတွေအတွက် ကွန်မန့် ရေးချင်တာပါ ၊ ဘယ်ကိစ္စ